Wamkele iZifundo zomyalezo ezivela kwiingcali ze-imeyile | Martech Zone
Wamkele iZifundo zomyalezo ezivela kwiingcali ze-imeyile
NgoLwesithathu, nge-2 kaJanuwari 2019 NgoLwesithathu, nge-2 kaJanuwari 2019 IKC Karnes
Umyalezo owamkelekileyo usenokuqala ubonakale ngathi awubalulekanga njengoko abathengisi abaninzi bebeya kuthi xa umthengi sele ebhalisile, isenzo senziwe kwaye baqinisekiswa kwindima yabo. Njengabathengisi, nangona kunjalo, ngumsebenzi wethu ukukhokela abasebenzisi kwi lonke amava kunye nenkampani, ngenjongo yokukhuthaza ukwanda okuqhubekayo ixabiso lokuphila kwabathengi.
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kumava omsebenzisi kukuqala. Olu luvo lokuqala lunokuseta ulindelo kwaye ukuba luyaphazamiseka, abathengi banokuthatha isigqibo sokuphelisa uhambo lwabo kwangoko nangoko.
Iinkampani ezininzi ziyasilela ukwamkela indlela ekubaluleke ngayo ukukhwela ebhodini. Ukusilela ukufundisa abasebenzisi beendawo ezininzi inkampani enokuthi ibonelele ngexabiso kunokubonisa intlekele kwikamva lenkampani. Umyalezo wokwamkela unokuba licephe lesilivere ukondla abathengi olu lwazi lubalulekileyo.
Ke, ngawaphi amacandelo ephulo lokwamkela umyalezo eliyimpumelelo? Ukusuka ekufundeni iinkampani ezisebenzisa ngempumelelo abasebenzisi abakwinqanaba kunye namaphulo emiyalezo eyamkelekileyo, kukho imixholo eqhelekileyo:
Thumela kwidilesi ye-imeyile yomntu.
Yenza umxholo womxholo kunye negama lommkeli.
Chaza into enokulindelwa ngabathengi ngokulandelayo.
Nika umxholo wasimahla kunye nezixhobo kunye nezaphulelo.
Ukukhuthaza ukuthengisa okugqithisileyo.
Ukuphumeza ezi zicwangciso ngaphakathi kwemiyalezo yakho yokwamkela i-imeyile kunokunceda ukonyusa amaxabiso okucofa kunye nokuzibandakanya. Ukwenza ubuqu kwii-imeyile zodwa kuye kwafunyanwa kukonyusa amaxabiso avulekileyo ngo- 26%.
Olunye uhlobo olunomdla kwi-imeyile kukubonelela ngokuhambisa oopopayi ngaphakathi kokubonakalayo ukukhawulezisa iso ngokukhawuleza kwaye ugcine ukuzibandakanya. Ii-GIF, umzekelo, zibonelela kuphela ngezakhelo ezimbalwa ezigcina ubungakanani befayile zincinci kwaye ivumela ii-imeyile ze-HTML ukugcina isantya sokulayisha ngokukhawuleza.
Ukuthengiswa kokuhanjiswa kuye kwaba yenye into ebandakanyayo kumyalezo owamkelekileyo wokukhuthaza ishishini ngomlomo. Xa umthengi esabelana ngokubhalisela kutshanje okanye ukuthenga nomhlobo kunokuba yeyona ndlela inamandla yokuguqula, yiyo loo nto i-imeyile yokuqala ilixesha elihle lokutyala le mbewu. Esinye sezona zicwangciso zibalaseleyo zokukhuthaza ukuthengisa okusebenzayo kukunikezela ngamacala amabini. Oku kubonelela bobabini umthengi owabelana naye kunye nomamkeli wabo ngenkuthazo yokwenza ngokuthunyelwa.
Sebenzisa iindlela ezinje ngezi kunye nokunye imeyile yemikhankaso yemiyalezo eyamkelekileyo inokukunceda ukukhulisa umsebenzisi onempilo kunye nokufumana amava abathengi. Sebenzisa okubonwayo ngezantsi kwiCleverTap ukukhokela isicwangciso somyalezo owamkelekileyo.
tags: ukwenziwa kwe-imeyileiingcebiso zomyalezoUmyalezo we-imeyile onboardUmyalezo wokukhwelaukuthengisa ukuthunyelwaumyalezo owamkelekileyo
U-KC Karnes yingcali eyaziwayo yokuthengisa kunye nosomashishini onoxanduva lokukhulisa ezinye zeenkampani ezishushu zeteknoloji eSilicon Valley, kubandakanya uCleverTap, okrelekrele Iqonga lokuThengisa ngeSelfowuni.
Intengiso ye-Omnichannel ivelisa ukuThembeka okungakumbi naBathengi abaXabisekileyo
Entsha Martech Zone Ilogo ye2019